LIVE SUUQA & MAALINTII AFARAAAD: Jose Mourinho Oo Laba Saxii Ku Dhaw – CHelsea Oo Daafac Ku Guuleysatay Saxiixiisa – Arsenal Oo Qorshe Cusub Suuqa Keentay – Sheekooyinka Ka Cusub Liverpool Iyo Kooxdaada. | Haqabtire News
LIVE SUUQA & MAALINTII AFARAAAD: Jose Mourinho Oo Laba Saxii Ku Dhaw – CHelsea Oo Daafac Ku Guuleysatay Saxiixiisa – Arsenal Oo Qorshe Cusub Suuqa Keentay – Sheekooyinka Ka Cusub Liverpool Iyo Kooxdaada.
Kulan wacan oo wanaagsan, dhamaan aqristayaasha shabakadda ciyaaraha haqabtirenews.com, meelkasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada wararkii suuqa kala iibsiga iyo wararka wargeysyada ugu waweyn maanta oo isniin ah.
Tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa doonaya saxiixa xiddiga qadka dhexe ee kooxda Derby County Will Hughes kasoo kooxdiisa bandhig fiican ku heysta,
Everton ayaa £ 20m ku dooneysa ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Manchester United Juan Mata.
Real Madrid ayaa £ 35m diyaar u ah in ay kusoo xerlo geliyaan goolhayaha Tottenham Hotspur Hugo Lloris.
Robin van Persie ayaa dalb ka helay kooxaha Crystal Palace iyo West Ham, xili macquul ay tahay in uu ka dhaqaaqo kooxda Fenerbahce.
Tottenham ayaa qorsheyneysa inay £ 38 milyan kusoo qaataan weeraryahanka Inter Milan Mauro Icardi .
Paul Pogba wuxuu jeclaan lahaa in uu u dhaqaaqo Real Madrid ama Barcelona halkii Premier League uu aadi lahaa.
Manchester United ayaa weli doonaya Paul Pogba – oo diyaar ay ula yihiin in ay ku bixiyaan £ 80m.
Tababaraha cusub ee Southampton Claude Puel, ayaa qorsheynaya £12.5 in uu ku keeno daafaca kooxda Lille Djibril Sidibe,
Daafaca xulka Iceland Ragnar Sigurdsson ayaa rajeynaya inuu u dhaqaaqo kooxaha Premier League.
Chelsea ayaa ku guuleysatay tartanka £ 30m ah ee loogu jiro daafaca Napoli Kalidou Koulibaly.
Celtic ayaa isku diyaarineysa inay bixiyaan qiimaha lagu burburin karo heshiis kooxda Reading uu kula jiro Chris Gunter oo kamid ah daafacyada ugu wanaagsan Xulka Wales ee Euro 2016 ka qeyb galaya.
Barcelona ayaa raadineysa daafac garabka ee kooxda Manchester United Matteo Darmian sida saxaafada Spain weli ku warameyso.
Liverpool ayaa £ 14m, ku dooneysa ciyaaryahanka khadka dhexe Joe Allen haddii uu ka tagayo kooxda.
Manchester United ayaa wadahadalo kula jirta ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Mexico Hirving Lozano, sida ay sheegtay kooxda ciyaaryahan uu ka tirsan yahay ee Pachuca.
Liverpool iyo Everton ayaa ku dagaalamaya saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Belgium Axel Witsel, halka kooxaha Manchester United, Chelsea, Inter Milan, AC Milan iyo Juventus isha ay ku hayaan xiddiga.
Tottenham ayaa dhameystiri doonta saxiixa weeraryahanka Dutch Vincent Janssen kasoo ka tagi doona kooxda AZ Alkmaar 48 saacadood ee soo socota.
Leicester ayaa xiiso u qabta saxiixa xidiga Wales ee weerarka ka ciyaara ee Hal-Robson Kanu.
Roma ayaa rajeyneysa inay sii heystaan goolhayaha Arsenal Wojcech Szczesny xilli ciyaareed kale.
Juventus ayaa ku dhow inay ku garaacdo Chelsea saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leicester City N’Golo Kante.